लोकनाथको नामै ‘९ लाखे बाख्रा व्यवसायी’ - Baikalpikkhabar
लोकनाथको नामै ‘९ लाखे बाख्रा व्यवसायी’
झापा, २२ वैसाख । सुन्दै अचम्म लाग्न सक्छ । एउटै बोकाको दाम ९ लाख । साच्चै झापा, अर्जुन धाराका एक व्यवसायी हुन् लोकनाथ दाहाल । उनी स्थानियस्तरमा नौं लाखको बोका व्यवसायी भनेर चिनिन थालेकाछन् । उनले यो बोका नवलपरासी गैडाकोटबाट किनेका हुन् । यो बोकाको धेरैं चर्चा हुने गर्दछ । उनको त्यो बोका हेर्न धेरैं मानिसहरु आउने गर्दछन् । छिमेकमा पनि नौं लाखको बोका वालाको घर सोध्यो भने सबैले बताईदिने गर्दछन् ।
के साच्चै एउटा बोकाको दाम नौं लाखनै हो त ? हामीले कति दाममा किन्नु भयो ? किन नौं लाख रुपैंया दाम लगाउनु भयो ? उनी भन्छन्, ‘यस्तो बोका बिरलै पाईन्छ । यसको मासु पनि टन्नै हुन्छ । मासु व्यवसायीको लागि यो उन्नत जातको बोका एकदमै राम्रो हुन्छ ।’ जताततै सजिलै नपाईने हुनाले यसको दाम आप्नो आवश्यकता अनुसार राखिने लोकनाथ बताउँछन् । मानिसहरु अहिले आफूले चाहे जस्तो व्यवसाय भएन भनेर विदेश पलायन हुने कैयौ उदाहरण हामी देख्न सक्छौं । आप्नै गाँउ अनि समाज अनि आप्नै घरमा पनि धेरै मानिसहरु वेरोजगार भए भनेर सरकारलाई दोस दिने हामीले धेरै सुन्दै र देख्दै आएका छौं । तर आप्नो ठाउँबाट प्रायस नगर्दा पनि वेरोजगारीको संख्या बढेको भनेर धेरैथोरलाई मात्र अडकाल बाजी गरेर आफै सोराजगार हुने प्रयत्न गर्दछन् । यस्तै एक उदाहरण हुन् झापाका लोकनाथ ।
झापाका यी लोकनाथ दाहालले आफैले घरमा कृषि व्यवसाय गरेका छन् । उनले एउटा बाख्रा फार्मनै खोलेर बाख्रा व्यवसाय गर्न थालेका छन् । उनले केही महंगो दाम हालेर एउटा बोका ल्याएका हुन् । उन्नत जातको बोकाबाट धेरैं आम्दानी गर्ने भनेर अडकल बाजी गरेर व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । अहिले झापाको अर्जुनधारा भन्ने गाउँमा यो व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । उनले आप्नै घरमा एउटा खोर बनाएर बोयरकासाथै लोकल बाख्रा व्यवसाय गर्न थालेको उनी वताउछन् । उनले केही समयदेखि उन्नत जातको बोका व्यवसाय संचालनका लागि किनेर ल्याएका हुन् ।
भन्छन्, ‘यो बोका छब्बीस केजीका छ । यो बोकाले चै खासमा कति खान्छु भनेर अन्दाज गर्न पनि सक्दैंन । कति खाँदा अगाईन्छ । कहिले काही अपच भए छेर्ने पनि गर्दछ । यो बोकालाई पाल्न निक्कै ग्राहो गर्दछ । मौंसम, तापक्रम हेरेर उसको खाना अनि दाना दिनु पर्ने लोकनाथ बताउँछन् ।
लोकनाथले अहिलेसम्म खासैं आम्दानी धेरै त गर्न सकेका छैंनन् । तर धेरै आम्दानी गर्ने भन्ने उनको लक्ष्य रहेको छ । उनले केही दिन अगाडि केही व्यक्तिको बाख्रामा बोका लगाए वापत पैंसा लिएको पनि बताए । उनलाई कसरी दाम निर्धारण गर्ने त भन्दाखेरी उनले आप्नो आवश्यकता अनुसार दाम लिनेदिने गरेको बताउँछन् । किनकी आप्नो आवश्यकता अनुसारनै दाम लगाउने लोकनाथ बताउँछन् । उनले यो उन्नत जातको बोका मिक्स गरेर केही बोकाहरु उत्पादन गरेका छन् । उनीसँग केही लोकल बोकाहरु पनि छन् । उनले कति दाम लिएर अरुलाई बोका लगाउन दिन्छन् त उनले बताएका पनि छन् । झापामा अहिले यी व्यवसायी नौं लाखको बोका व्यवसायी भनेर चिनिने गर्दछन् । अहिले उनले घरमा धेरैं बाख्रपालन गरेका छन् । उनले सोही व्यवसायबाट आप्नो घरपरिवारको खर्च गुर्जान सक्ने बताउँछन् । उनले अहिलेनै व्यवसाय गरेर मनगे पैंसा आम्दानी नगरे पनि भर्खरै पाँच महिना अगाडिमात्र व्यवसाय सुरु गरेका हुनाले बिस्तारै मनगे आम्दानी गर्नेमा उनी डुक्कछन् । खासमा यो बोको मासुकै लागि पालिने पनि लोकनाथ बताउँछन् ।
आइतबार, २२ बैशाख, २०७६, दिउँसोको १२:१५ बजे